Nei KingHow - Xiamen Kinghow Kunze Chigadzirwa Chigadzirwa, Ltd.
KingHow inogadzira masaga ese ekunze, ejimini yemitambo, mafambiro uye mararamiro. Zvigadzirwa zvedu zvikuru zvinosanganisira Baseball Equipment Mabhegi, Kubata Tackle Bhegi, Kuvhima Mabhegi, Kupfura Mabhegi, Ice Hockey Bags, Camping Bags, Sports Bags, Daily Backpack, Laptop Bags, Gorofu Mabhegi, Baseball Gloves uye zvichingodaro. Tine nhoroondo refu se mutengesi wemabhegi nemikwende yevatengi vepasirese. Isu tinopa yakazara yakazara masevhisi kune ese ako OEM uye ODM kubvunza nemakwikwi emafekitori mitengo.
Transparency & Kutendeseka
Kuvaka kuvimba izvo zvatinofanira kuita kungova pachena pachena newe. Chikwata chedu chiripo kuti chikupe iwe rwese ruzivo ruzivo iwe rwaunoda kuziva nezvedu, nezve maitiro edu kana kunyangwe iwo madhiri emutengo wako kuverenga.
Yedu bhizinesi modhi ibasa uye kuita. Isu tinonzwisisa kuti ingani njodzi dziri kutora vatengi vachiri kubata nemaChinese mabhegi vagadziri. Mafekitori anofanirwa kutanga aona mhando uye mutengo wakanaka.
Mabhegi edu anogona kutevedzera zvese zvepasi rose zviyero zvakadai TOV, CSCV, SGS, TUV, ITS, REACH nezvimwe. Isu tinovimbisa hunhu hwedu, kana tikakundikana kuzvipira kwake tinotora mabasa akazara, kudzorera zvinhu kana kukudzosera mari yacho.
Neruzivo rwedu rwakafuma, tinogona kukurudzira machira, zvishongedzo kana dhizaini imwe nzira yekukwidziridza mutengo kuti usangane nechinangwa chako chebasa rehomwe. Isu ticharamba tichifunga mupfungwa dzako kushoma kwehunhu hunodiwa mukutsvaga kwedu uye mhinduro.
Yedu inoshanduka kugadzirwa uye manejimendi sisitimu inozoona zvese mhando uye huwandu, isu tinopa inokurumidza kutumira nguva muindasitiri kune yega kona pasi. Kazhinji yedu inotungamira nguva ichave mazuva 35-40.
Kuti uve unowanikwa, kuti upindure nekukurumidza maemail uye mibvunzo, kuti ikubatsire mune chako chigadzirwa chisikwa uye uwane mhinduro, aya ndiwo mamwe mazano ari KingHow arikuvandudza kuunza mutengi wedu kugutsikana kwepamusoro.
Taura uye Tchinjana
Kana mutengi akatanga kutenda kuti isu takanyatsozvipira kugutsikana kwavo, tinogona kutanga kuchinjana uye kutaura zvakadzika mukutarisira kwemutengi. Chikwata chedu chiripo kuti chikupe zano uye mhinduro.